Nge-11 kaNovemba i-Zodiac-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope - Imiqondiso Yeenkwenkwezi
Eyona Imiqondiso Yeenkwenkwezi Nge-11 kaNovemba i-Zodiac yi-Scorpio-Ubuntu obuGcweleyo beHoroscope
Nge-11 kaNovemba i-Zodiac yi-Scorpio-Ubuntu obuGcweleyo beHoroscope
Uphawu lwe-zodiac ngoNovemba 11 yiScorpio.
Ngaba i-aquarius eyindoda emva kokuqhawuka ucinga ngomfazi wayo
Uphawu lweenkwenkwezi: Scorpion . Oku kunxulumene neminqweno eyimfihlo, imfihlakalo kunye namandla kunye nokuhlaselwa okufihlakeleyo. Lo ngumqondiso wabantu abazalwa phakathi kuka-Oktobha 23 noNovemba 21 xa iLanga lithathwa njengeScorpio.
Inkqubo ye- Iqela leScorpius Ngenye yeenkwenkwezi ezilishumi elinambini zeenkwenkwezi, kunye neyona nkwenkwezi eqaqambileyo yiAntares. Incinci kakhulu egubungela ummandla weedigri ezikwere ezingama-497 kuphela. Ilele phakathi kweLibra ukuya eNtshona kunye neSagittarius ukuya eMpuma, egubungela ukubonwa okubonakalayo phakathi kwe-40 ° kunye -90 °.
Igama iScorpio yinkcazo yesiLatin yeScorpion, uphawu lwe-zodiac lwangoNovemba 11. AmaGrike ayibiza ngokuba yi-Scorpion ngelixa i-Spanish ithi yi-Escorpion.
Uphawu olwahlukileyo: Taurus. Olu phawu njengoluchaseneyo okanye oluncedisayo lweScorpio lutyhila ukuqonda kunye ne-wits kwaye lubonisa ukuba ezi zimpawu zelanga zineenjongo ezifanayo ebomini kodwa zifikelela kubo ngokwahlukileyo.
Ukuziphatha: Kulungisiwe. Oku kunokuxela imeko yehlombe yabantu abazalwe ngo-Novemba 11 kwaye baluphawu lokucoceka kunye nokuguquguquka.
loluphi uphawu lwe-zodiac ngo-Epreli-7
Indlu elawulayo: Indlu yesibhozo . Le ndlu ilawula izinto zabanye, ijolise kumzabalazo osisigxina womntu wokuba nayo yonke into eyakhelwe ngabantu. Oku kukwabhekisa kwimfihlakalo kwaye okungaziwayo kukufa.
Umzimba olawulayo: UPluto . Olu nxibelelwano lubonisa ukuphapha kunye nokulunga. Ikwabonakalisa ifilosofi kubomi baba bantu. UPluto unxulunyaniswa nemithombo yokuzihlaziya yomzimba.
Isiqalelo: Amanzi . Eli nqaku licebisa ubume obungaqondakaliyo kunye nobunzulu babo badityaniswe noNovemba 11. Rhoqo bakwanobubele kwaye bafudumele kwaye babonakala behamba nokuhamba nje ngento yabo enefuthe.
Usuku lwethamsanqa: uLwesibini . Umthetho olawulwa nguMars ngalo mhla ubonakalisa ukuphathisa kunye namandla kwaye kubonakala ngathi unendlela efanayo yokuhamba njengobomi beScorpio.
Amanani anethamsanqa: 4, 9, 12, 13, 25.
Ulwazi oluthe kratya ngoNovemba 11 Zodiac ngezantsi ▼
Nge-16 kaDisemba iZodiac yiSagittarius-Ubuntu obupheleleyo beHososcope
Ngomhla we-10 ku-Epreli i-Zodiac yi-Aries-Ubuntu obupheleleyo beHososcope
Inamba yendoda kunye nehashe ukuhambelana komfazi
icala elibi labasetyhini
leo fem pisces ukuhambelana kwendoda
Taurus indoda kunye taurus ubudlelwane mfazi
loluphi uphawu ngoNovemba 29